I-china DuoDuo Isonge imithwalo yetroli ye-DX3012 ngomvelisi weTeleskopu yomvelisi kunye nomthengisi | UDuoduo
I-DuoDuo Songa imithwalo yetroli DX3012 ngesiphatho seTeleskopu
Inombolo Umba: DX3012
Ubungakanani obuvuliweyo: 51 × 48.5x107CM
Ubungakanani obujiyiweyo: 48.5x81x6.5CM
Ubungakanani beplate: 48.5x35CM
Ubungakanani bamavili: Φ170mm
Umbala: Ngwevu noMnyama
Isixhobo: Isinyithi kunye nePlastiki
Ubungakanani beCarton: 82.5x49x20cm
Yinqwelo yemithwalo enzima yemithwalo, uyilo oluhle kunye nokuhlala ixesha elide, kunye nezixhobo zokubamba zeplastiki, ungayisebenzisa ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo. Isuti yokusebenzisa usapho kunye nokuphuma. Amavili kunye neplate esezantsi ziyasongwa, ezigcina kakhulu indawo kwaye zizise ukulungeleka kubomi bemihla ngemihla kunye nokuhamba. Kulula ukuyifaka ezimotweni zethu. Isitya esisezantsi senziwe ngeAluminiyam, umthwalo onzima kunye nokulwa nomhlwa, kunye noyilo lokulwa nesiliphu kunye nokusetyenziswa okukhuselekileyo.
I-Aluminium yokusonga imithwalo ngesandla ilori yokuphatha ezimbini kunye nokubamba ilungele imisebenzi emikhulu efuna ilori yesandla esonga ukuhamba okanye ukugcinwa. Nanini na xa kufuneka ususe izinto ezinkulu, ezinzima, ilori yesandla ayixabisekanga- nangona kunjalo, ingxaki yesiqhelo kukuba uyigcina phi xa ugqibile ngayo. Yiyo loo nto le iloli yokusonga ingumbono olunge kangaka. Xa ingasetyenziswanga, iyajijelwa yiphaneli ebumbeneyo, ke kulula ukuxhoma eludongeni okanye kwivenkile kwikhabethe okanye esiqwini semoto. Ubungakanani obudityanisiweyo bufana neemoto, iiveni, kwanaphantsi kweedesika. Uyilo olulula lokuSonga lwenza ukuba lusebenze kwaye kube lula ukulugcina.
Itrleyley engasindi yemizi-mveliso inceda ukuhambisa izinto ezinzima. Gcina umva wakho kwaye uphathe izinto ujikeleze ngesixhobo esifanelekileyo somsebenzi. Kukulungele ukusetyenziswa ekhaya, eofisini, kwishishini, kukhenketho okanye ekuthengeni. Vumela idolly yethu erhabaxa inyuse ubunzima. Yinyuke! ukusonga ilori kunye nedoli sisisombululo sakho sokugqibela sokuhambisa izinto ezinzima. Gcina umva wakho kwaye uphathe izinto ujikeleze ngesixhobo esifanelekileyo somsebenzi. Le nqwelo eguqukayo ilungele ukusetyenziswa ekhaya, eofisini, kwishishini, kukhenketho okanye ezivenkileni.
Egqithileyo I-DuoDuo Songa imithwalo yetroli ye-DX3011 ngesiphatho seTeleskopu kunye namavili erabha
Okulandelayo: I-DuoDuo yokusonga imithwalo yeetroli i-DX3013 enamavili aphathwayo Umsebenzi onzima weAluminiyam engenakubekwa imithwalo
DuoDuo Ukusonga imithwalo netroli DX3004 ezintathu-Whe ...
DuoDuo asonge imithwalo Sibona DX3001 enamavili ...
Intengiso eshushu enkulu ilungele ukuhambisa iivili ezi-6 ivili ezintathu ...